Haweeney Faransiis ah oo lagu afduubtay meel loo dalxiistago oo u dhaw xadka Soomaaliya iyo Kenya. – Radio Daljir
Haweeney Faransiis ah oo lagu afduubtay meel loo dalxiistago oo u dhaw xadka Soomaaliya iyo Kenya.
LAMU, Oct 01 – Saraakiisha waddanka Kenya ayaa xaqiijiyey in haweeney u dhalatay dalka Faransiiska lagu afduubtay jasiiradda loo dalxiis-tago ee LAMU oo ku dhow dalka Somalia.
Haweeneydaan oo la rumeysanyahay in ay hawlgab tahay ayaa lagu weeraray deegaanka Ras Kitau ee jasiiradda LAMU ee loo dalxiistago
Dad goob-joogayaal ah ayaa sheegaya in ay maqlayeen dhawaqa xabado ay rideen kooxaha wax af-duubtay, waxaana dadkaasi goob-joogayaasha ahi tilmaameen in haweeneydaasi lagula cararay doonni nooca dheereeya ah oo ay kooxahaasi wateen.
Weerarkaan ayaa imaanaya 3 asbuuc kaddib markii lamaane British ah lagu weeraray deegaanka waqooyiga ka xiga LAMU ee Kiwayu, iyadoo xabadihii ay fureen kooxihii hubaysnaa uu ku dhintay saygii haweeneyda la afduubtay ee oo lagu magcaabo Judith Tebbutt.
Haweeneyda British-ka ah ee Judith Tebbutt ayaa markii la afduubtay loola gudbay xadka dhinaca dalka Somalia, halkaasi oo weli lagu haysto.
Af-duubashadaan ugu dameysa ayaa timid, iyadoo ay si weyn hoos ugu dhacday dalxiiska deegaankaasi LAMU ee oo ku yaalla dhulka fog ee deriska la ah dalka Somalia oo ay ka hawlagaan kooxo burcad-badeed ah iyo walba kooxo kale oo mintid hubaysan ah.